I-anti-Obesity powder: Cetilistat powder vs Orlistat powder | AASraw
/Blog/cetilistat , Orlistat/I-anti-Obesity powder: Cetilistat powder vs Orlistat powder
ezaposwa ngomhla 04 / 12 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo cetilistat, Orlistat.
Yonke into malunga ne-Cetilistat powder vs Orlistat powder
3.Cetilistat powder Isisombululo
4.Orlistat powder Isilinganisi
Uhlolo lwe-5.Cetilistat powder
Uhlolo lwe-6.Orlistat powder
I-7.Cetilistat nemiphumo emibi
Iimpembelelo ze-8.Orlistat yefuthe
I-9.Cetilistat powder Eyona nto ixhomekeke kwi-Orlistat powder
10.Buy I-anti-Obesity powder online
Cetilistat powder iyisishibitor ye-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwe-enzyme, i-triglycerides ukusuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ishiywe ukuba idibene. Esi sigqirha, ngelixa lifana nesicatshulwa se-FDL esivumelekileyo se-FDA okanye se-Orlistat powder powder, sinokuba neprofayili yecala elixhomekeka ngakumbi ngenxa yesakhiwo esithile se-molecular. Icandelo le-2 lihlolisise i-612 obese, izifundo zesifo sikashukela nge-BMI ye-28 ukuya kwi-45 kg / m2 kwixesha le-12 yeveki. I-Cetilistat powder i-80 kunye ne-120 mg ikhuthaza ukulahlekelwa kwesisindo esikhulu xa kuqhathaniswa ne-placebo (3.85 kg kunye no-4.32 kg no-2.86 kg, ngokulandelanayo). I-Cetilistat-induced loss losses yafana nokulahlekelwa kwesisindo esifumaneka nge-Orlistat powder powder (3.78 kg). I-Cetilistat powder powder yaxinwa kakuhle kwaye yabonisa ukuyeka okuncinci ngenxa yeziganeko ezingathandekanga kunamaqela ase-placebo kunye nama-Orlistat. Ngenxa yokuba ukuyeka kweqela le-Orlistat lalibi nakakhulu kunokuba ku-120 mg Cetilistat powder powder kunye namaqela e-placebo, kwaye yayingenxa yeziganeko ezimbi zesisu, i-Cetilistat powder ingaba yi-lipase inhibitor ekhethiweyo yokuphumeza ukulahleka kwesisindo. Izilingo ze-3 ze-Cetilistat powder powder njengamanje ziyaqhubeka eJapan.
I-Orlistat powder powder iyona nto inamandla kwaye inokubuyiswa kwesisu esiswini sokukhusela i-lips inhibitor ekuthintela ukunyuswa kwamafutha ngama-30% ngokuvimbela i-pancreatic ne-gastric lipase. I-Orlistat powder ivunyiwe kwi-1998 kwaye okwangoku kuphela isicatshulwa esifumanekayo sokulawula ixesha elide lokunyanya. I-dose emiselweyo yi-120 mg capsule ii-3 amaxesha onke, kunye ne-dose isigamu (i-60 mg) iyatholakala kwi-counter-counter ngaphakathi kwamanye amazwe, kuquka ne-US Ukusebenza I-Orlistat powder yokulahleka kwesisindo kuye kwabikwa kwiiRCT ezininzi zexesha elide lokulawula ukukhuluphala (malunga ne-4 iminyaka). Kwiimvavanyo-meta ze-12 kunye ne-15 zilingo, ukuhlula kwentsingiselo ekulahlekeni kwesisindo ngenxa ye-Orlistat powder yayingu-2.59 kg (95% CI, -3.46 kuya -1.74 kg) kwiinyanga ze-6 kunye -2.9 kg (-3.2 ukuya kwi -2.5 kg ) kwiinyanga ze-12, ezazingaphezu kwe-placebo. Umphumo ozuzekileyo kumzimba wenyama uwanele ukuphucula imilinganiselo emininzi ye-cardiometabolic, kubandakanywa ukujikeleza kwembombo, uxinzelelo lwegazi, amanqanaba e-blood glucose, kunye neepidal profiles. Kuhlalutyo lweemeta olubandakanya uphando lwe-15 malunga nabathathi-nxaxheba be-10,995 abaye baphathwa nge-Orlistat powder powder okanye kwindawo ye-placebo ubuncinane kwi-6 kwiinyanga ze-12, unyango kunye ne-Orlistat powder lidibaniswe nokunciphisa okukhulu kwi-cholesterol epheleleyo emva kokulungiswa kokulahleka kwesisindo, Ubonisa i-Orlistat powder iyisiluleko esiluncedo sokuphucula i-cardiovascular risk profile profiles kwizigulane ezigqithiseleyo. I-Orlistat powder yanciphise iziganeko zolu hlobo lwe-2 sikashukela ukusuka kwi-9.0% ukuya ku-6.2% (HR, 0.63; 95% CI, 0.46 ku-0.86) kwixesha elide le-4.
Phakathi kwezigulane zaseKorea ezitholayo i-Orlistat powder kwiiveki ze-24, ishintsho lesisindo sokusukela kwisiseko -2.8 kg. Unyango kunye ne-Orlistat powder nayo yaphucula amanqaku amaninzi. Kwakukho inkqubela ebonakalayo zolawulo Glycemic (HbA1c, -0.87%; P <0.01), insulin uzila, cholesterol iyonke, LDL-C (P <0.001), wedini (-5.48 ± 0.54 cm, P <0.001), igazi iSystolic uxinzelelo lwegazi kunye ne-diastolic yegazi (P = 0.000), ngaphandle kwemiphumo emibi.
Imiphumo emibi kakhulu ye-Orlistat powder isisu kunye nesifo sohudo, u-incecinity fecal, u-spotty spotting, i-flatulence, bloating, kunye ne-dyspepsia. Ngenxa yesiphumo esibi, i-Orlistat powder ayikwazi ukunyamezeleka. Nangona kunjalo, iziphumo zempembelelo zivame ukuvela kusasa kwaye zingancitshiswa njengoko izigulane zifunda ukuphepha ukutya okunotyebileyo.
Kungekudala, ukulimala kwesibindi esikhulu kuye kwabikwa kwiminyaka eyi-10 edluleyo. Phakathi kwe-1999 kunye ne-2008, i-US FDA ifumene iingxelo ze-32 zengozi enkulu yesibindi, kubandakanya iimeko ze-6 zokuhluleka kwesibindi kwizigulane zisebenzisa i-Orlistat powder powder, okubangela ukuba i-US FDA ihlole Ulwaphulo lwe-Orlistat khu seleko. Uhlaziyo oluchongiwe lilonke leemeko ze-13 zengozi enkulu yesibindi, ezichazwe phakathi kwe-Aprili 1999 kunye no-Agasti 2009 kubantu abaqikelelwayo abantu abayi-40 emhlabeni wonke abaye basebenzisa i-Xenical okanye i-Alli. I-FDA yase-US icebisa abaqeqeshi bezempilo ukuba baqhubeke nomyalelo we-Orlistat powder ngo-Agasti 2009, kuba ukulimala kwesibindi kwakunqabile. Nangona kunjalo, ukuhlaziywa ngo-Meyi 2010 kukhokelela ekuhlaziywa kwelebula kunye nokongezwa kwesilumko esinobungozi obukhulu ekufundiseni uluntu ngokuphathelele iimpawu kunye neempawu zengozi yesibindi.
3. I-Cetilistat powder Isisombululo
Cetislim (I-Cetilistat powder) i powder ihlinzekwa njenge-capsules ze-60mg zamandla zolawulo ngomlomo. Iyeza lithathwa ngokutya ukuqinisekisa ukuba lisebenza ngelixa ukutya kukugaya, ukwenzela ukuba ukuxutywa kwamafutha ukusuka ekudleni kunokunciphisa ngempumelelo. Ugqirha wakho uya kukucebisa malunga nokuba uncedo olunjani lwamachiza ukuthatha kunye nomthamo ngamnye, kwakunye nemilinganiselo efunekayo yemihla ngemihla. Kubaluleke ukuba uhambelane nale miyalelo. Musa ukuthatha okungaphezulu kunokuba ugqirha wakho akuxelele ukuba uthathe.
Iifomsile ze-Cetislim zinikezelwa ngamandla e-60 mg. I dose kukuthatha i-capsule enye ngesidlo ngasinye. Musa ukunqumla ukutya kwaye ungathathi ngaphezulu kwamachiza kunokuba umiselwe. ukuthatha letilisat kunye nokutya kunokunceda ukuvimba amanqatha kwizinto ozidlayo ekungeneni emzimbeni. Qinisekisa ukuba usebenza nodokotela wakho ukuqinisekisa ukuba ukutya okulungileyo kuyadliwa kwaye uthatha le nyilisi njengoko kufuneka.
4. I-Orlistat powder Isilinganisi
I-Orlistat powder yayisetyenziswe ngomlomo njenge-capsule kunye ne-capsule engabonakaliyo.Imilinganiselo ephakanyisiweyo ye-Orlistat powder enye ye-120-mg (i-capsule) ngesinye isikhathi, kathathu ngosuku. Thatha i-Orlistat powder ngexesha lokutya okanye ukuya kwi-1 iyure emva kokutya. Ukuba ukutya kungaphumeleli okanye ungenawo amanqatha, ungasenqa idosi yakho. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigcawu okanye ilebhu yepakethi ngokucophelela, kwaye ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-Orlistat powder ngokuchanekileyo. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho okanye uchazwe kwiphakheji.
★ Xa Uthabatha i-Orlistat powder
• ukwahlula inani leoli, i-carbohydrates, kunye neprotheni.
• Nangona uthatha ukulahleka komzimba we-Orlistat powder, kufuneka ugweme ukutya okunamafutha angaphezu kwama-30%.
• Xa udla inyama, inkukhu (inkukhu) okanye intlanzi, yidla kuphela i-2 okanye i-3 ounces (i-55 okanye i-85 grams) ukwenzela ukukhangela, okunqwenelekayo kwenyama kukulungile. kunye neengqolowa ezininzi, iziqhamo kunye nemifuno. Yenza iimveliso zobisi ngokupheleleyo kunye ne-nonfat okanye i-1% yobisi kunye nezinto ezincinci zobisi.
• Thatha i-multivitamin yemihla ngemihla equkethe iivithamini A, D, E, K, kunye ne-beta-carotene
I-Orlistat powder ibimbela umzimba wakho ukutyunjwa kwamavithamini athile kunye ne-beta carotene. Ngoko ke, xa usebenzisa i-Orlistat powder kufuneka uthathe i-multivitamin yansuku zonke equkethe iivithamini A, D, E, K, kunye ne-beta-carotene. Funda ilebula ukuze ufumane imveliso ye-multivitamin equkethe iivithamini. Thatha i-multivitamin kanye ngosuku, iiyure ze-2 ngaphambi kweeyure ze-2 emva kokuthatha i-Orlistat powder, okanye uthathe i-multivitamin ngexesha lokulala.
Cofa apha: uthathe powder, okanye i-Orlistat powder, uthenge i-Orlistat powder, i-Orlistat side effect effect.
★ Emva kokuba uyisebenzise:
Gcina le nyilisi kwisitya, ivalwe ngokuqinile, Kuphi ukufikelela kubantwana. Umhla wokuphela kwe-Orlistat powder ngokuqhelekileyo yiminyaka eyi-2, ungcono ukuyigcina kwindawo yokushisa lokushisa kunye nokushisa okugqithiseleyo, ukungcolisa (kungekhona kwindawo yokuhlambela), nokukhanya. Indlela efanelekileyo yokulahla amayeza akho ngeprojekti yokubuyisela imithi endaweni yokucoca le mayeza kwindlu yangasese.
★ Uhambo lwe-Orlistat powder
I-Orlistat powder kufuneka ithathwe imihla ngemihla ukuze isebenze. Ukulahleka kwesisindo ngokuqhelekileyo kuqala kwiiveki ze-2 kwaye kuqhubeka kwi-6 kwiinyanga ze-12 kwi-Orlistat i-fat-fat loss. I-Orlistat powder Uya kukunceda ugcine lo bunzima obuncinane kwaye uncedise ukuthintela isisindo.
Ukuphuculwa kwimiba yengozi (njengokunciphisa uxinzelelo lwegazi oluphezulu, izinga lokushukela kwegazi kunye nokunciphisa amanqanaba e-cholesterol) ngokuqhelekileyo kugcinwe kwinyanga ye-1 yokuqala unyango kwaye igcinwe ngexesha loviwo lwe-Orlistat yonyango.
5. Ukuhlaziywa kwePowtilistat powder powder
I-Cetilistat powder iyimithi ye-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwe-enzyme, i-triglycerides ukusuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ishiywe ukuba idibene. Esi sigqirha, ngelixa lifana nesicatshulwa se-FDL esivumelekileyo se-FDA okanye se-Orlistat powder powder, sinokuba neprofayili yecala elixhomekeka ngakumbi ngenxa yesakhiwo esithile se-molecular. Icandelo le-2 lihlolisise i-612 obese, izifundo zesifo sikashukela nge-BMI ye-28 ukuya kwi-45 kg / m2 kwixesha le-12 yeveki. I-Cetilistat powder i-80 kunye ne-120 mg ikhuthaza ukulahlekelwa kwesisindo esikhulu xa kuqhathaniswa ne-placebo (3.85 kg kunye no-4.32 kg no-2.86 kg, ngokulandelanayo). I-Cetilistat-induced loss loss yayifana nokulahlekelwa kwesisindo esiphumelele nge powderat Orlistat (3.78 kg). I-Cetilistat powder powder yaxinwa kakuhle kwaye yabonisa ukuyeka okuncinci ngenxa yeziganeko ezingathandekanga kunamaqela ase-placebo kunye nama-Orlistat. Ngenxa yokuba ukuyeka kweqela le-Orlistat powder powder kwaba kubi nakakhulu kune-120 mg Letilistat powder kunye namaqela e-placebo, kwaye yayingenxa yeziganeko ezimbi zesisu, i-Cetilistat powder ingaba yi-lipase inhibitor ekhethiweyo yokuphumeza ukulahleka kwesisindo. Izilingo ze-3 ze-Cetilistat powder powder njengamanje ziyaqhubeka eJapan.
6. Ukuhlaziywa kwe-powder powder
Xa ucinga i-Orlistat powder powder kufuneka iqwalaselwe ngenyameko yemiphumo emibi, izifundo zeklinikhi kunye noko abantu bathetha ngako ngako. I-FDA ithumele ileta yomsalathiso yengozi ebalulekileyo yengxaki eyenziwe yi-Orlistat powder powder. Kukho nemiphumo emininzi emihle, kwaye abathengi abaninzi bakhankanya ukuba bafumana iziphumo. Kwakhona, uphando lweklinikhi luboniswe ukuba lusebenza kuphela ukuya kuma-6 iipounds zokulahlekelwa kwesisindo ngomnyaka owodwa. Le ndawo ayikho imali efunekayo ukuze kubekho iziphumo ezibonakalayo. Sekunjalo, abaninzi abantu abahlukumezayo bahluleka ukubona nayiphi na utshintsho kwisisindo.
Kukho ipilisi yokutya efanelekileyo ye-2016 ebizwa ngokuba yi-Sletrokor elalilinganiselwa ngale ndlela ngenxa yazo zonke izithako zendalo, ukulahleka kwamandla kunye nokunciphisa ukuthengwa kwamakhasimende. Abasebenzisi abaninzi bakhankanya ngokukhuselekileyo nangokusebenzayo ekuncedeni ukulahleka kwesisindo. Kwakhona kuboniswe ukuba kulungele ukunciphisa ukutya, ukunyuka kwe-metabolism, ukunceda ukuphucula imvakalelo kunye nezinye izibonelelo ezininzi. Unokufumana malunga nale pilisi yokutya ngokuchofoza apha.
I-Sletrokor iphinde ixhaswe yi-30 yembuyekezo yesiqinisekiso semali. Ukuba nangayiphi na isizathu ufuna ukucwangcisa ukubuya, unokwenza ngaphandle kokubuza imibuzo. Cofa apha ukuze ufumane okungakumbi ngeSletrokor.
7. Iziphumo eziphambili ze-Cetilistat powder
Eyona nto ibhalwa ngokubanzi Iziphumo eziphambili ze-Cetilistat powder izibilini ezinamafutha, isifo sohudo, ukungabikho kwefecal, ukunyuka kwamathumbu kunye nokunyaniseka. Ngokukodwa, kwizigulane zesifo seesifo esinesifo esinesibondlo sesifo se-diabetes esinezifo zesifo sesifo sesifo se-glycosylated hemoglobin (HbA1c) nazo zancitshiswa kakhulu. I-Cetilistat powder powder ibonisa iziganeko ezintle ezimodareyitha eziqhelekileyo, ikakhulukazi zesisu esiswini (i-steatorrhea), eneziganeko eziphantsi kwe-Orlistat powder powder.
8. Iimpembelelo ze-Orlistat zempilweni
Uninzi lweempembelelo ezichaphazelekayo kunye ne-Orlistat powder ziyimpawu zokutya, mhlawumbi ngenxa yokungabandakanywa kwamafutha. Iyona mpembelelo yecala ngokuqhelekileyo yenzeke utshintsho kwixesha leembilini, edlalwa rhoqo kwiiveki zokuqala zeeveki zokuthatha isongezelelo. Imiphumo emibi ingase ihambe, kodwa kunokwenzeka ukuba iqhubeke nokuhlala ixesha lomntu kwiyeza.
• Ukunciphisa ama-vithamines enamafutha anelumnyolo njenge-A, D, E, ne-K
• Ukukhulula intlungu engaphantsi
• Ukuvuvuka kwe-Ankle
• Ukuqhawukelwa ngumphefumlo
• Oily, izitshixo ezicolileyo
• Ukunyuka kwamathumbu, izihlalo ezikhululekile, ukukwazi ukulawula amathambo
Ukuphindaphinda kweempembelelo ezingasecaleni
I-FDA iphinde iphapashe ulwazi malunga nobukhulu beempembelelo ezithile. Ngomnyaka wokuqala wokuthabatha amandla okugulisa umyalelo we-Orlistat powder powder:
• I-26.6% yabasebenzisi babike ukubonakala kwe-oily.
• I-23.9% ibike igesi ngokukhutshwa.
• I-22.1% yabona ukunyuka kweengxube eziphuthumayo.
• I-20% yayinamanqatha okanye amanqatha amafutha.
• I-10.8% inenani elinyukayo lokuhamba.
• I-7.7% ibandezelekile ukungabikho komzimba.
Kwi-8.8% yabasebenzisi be-Orlistat ye powder, imiphumo emibi yayinokwaneleyo ukuba bayeke ukusetyenziswa. Ukongeza kwi-mild or moderate Iimpembelelo ze-Orlistat zempilweni, iziphumo ezibi kakhulu zingenzeka. Abasebenzisi abafumana imiphumo emibi kakhulu kufuneka bayeke ukusebenzisa kwaye baqhagamshelane nodokotela wabo.
9. I-Cetilistat powder powder Eyona nto ixutywe ngaphezu kwe-Orlistat powder powder
I-BUDAPEST, i-HUNGARY-Aprili 24, i-2007 - I-Cetilistat powder, inomxholo wezinyo zomzimba we-lipase inhibitor, ibonakala iyasebenza ekulawuleni ukunyanya nokugqithisa kwayo njengenye i-lipase inhibitor, i-Orlistat powder powder, ngelixa ibonisa ukunyamezela kangcono, ngokwecandelo lesibini 2 i-randomized, i-blind-blind, i-placebo elawulwa yi-placebo, izifundo ze-12 ngeveki.
"I-Lipase inhibition ibonakalise ukuphumelela kwizigulane ezigqithisileyo nakwizigulane ezigqithiseleyo zesifo sikashukela," watsho uPeter Kopelman, umfundisi, i-faculty yezempilo, iYunivesithi yase-East Anglia, eNorwich, eUnited Kingdom, owazisa izifundo ezimbini egameni leCetilistat powder yaseYurophu. Iqela apha kwi-15th Yurophu yaseYurophu yokuTyekela (ECO).
Uphando lokuqala luphande ukusebenzisa Cetilistat powder powder Kwizigulane ze-372 ezinobunzima bomzimba (BMI)> 30, kumaziko kulo lonke elaseYurophu. Zonke izigulane zafumana iingcebiso ezinzulu kwi-dietetic kulo lonke uphando kwaye zidla ukutya okunqunyiwe okubalwe ukuba malunga nama-kcals angama-500 ngaphantsi kwesisindo-ukugcina ukutya. Ukongeza, izigulane zanikwa i-60, i-120, okanye i-240 mg ye-Cetilistat powder, okanye i-placebo, ngexesha lokutya, kathathu ngamaxesha. Ukulahlekelwa kwexabiso elibalulekileyo kuye kwafunyanwa kuwo onke amaqela enyango kwiiveki ze-12, kunye nokunciphisa kwe-3.5-kg kwindleko efunyenwe kunye ne-120 mg Cetilistat powder powder kathathu ngokumalunga ne-placebo (P <.05).
"I-Cetilistat powder powder yayiphumelele ekunciphiseni ukulahleka kwesisindo kwiiveki ze-12 zokufunda," kusho uDkt. Kopelman kwintetho ngo-Ephreli 23rd. "Ukongezelela, kukho ukunciphisa okubonakalayo kunqeni." Kwiseshoni yesibini eyenziwa nguDkt. Kopelman, abaphandi babhalisa izifundo ze-612 ezigqithisileyo ngohlobo lwe-2 yesifo sikashukela, ababethabatha i-metformin. Uninzi lwezigulane nazo zineemimiselo, kwaye malunga neyesithathu nazo zithatha amayeza anetyholongwane.
Njengoko kufundwe kwangaphambili, izigulane zithole ukutya okunyanisekileyo kunye nenye yeendlela ezintathu ezahlukeneyo ze-Cetilistat powder (40, 80, okanye 120 mg), okanye indawo ye-placebo. Ukongezelela, iqela lokufunda lesine lalingenalutho kwi-120 mg ye-Orlistat powder powder amaxesha angama-3 imihla ngemihla. UCh. Kopelman uthe ukunciphisa amanqanaba okunciphisa ayenziwa kuwo onke amaqela enyango, malunga ne-35% yezifundo kwi-dose ye-Cetilistat ye powder powder ephezulu ekufezekiseni ukulahleka kwesisindo malunga ne-5% yobunzima bomzimba bokuqala okanye ngaphezulu. Ukongezelela, kukho ukunciphisa amanqaku athile kwi-hemoglobin ye-glycosilated (HbA1c) kwiiveki ze-12. Nangona idatha esebenzayo yayingalinganiswa phakathi kweCetilistat powder powder kunye ne-Orlistat powder powder, ukungafani okukhulu kwavela phakathi kwezi zimbini izilwanyana ngokuphathelele iingxelo zabo zokunyamezela, ngokutsho kukaDkt. Kopelman.
Ngokubanzi, izigulane eziphathwe nge-Orlistat powder powder ziphantse ziphindwe kabini iziganeko ezimbi kakhulu - ikakhulukazi isisu - ezikhokelela ekunqanyeni ukwelashwa kunokuba kwiCetilistat powder group group. Isantya seziganeko ezimbi ezikhokelela ekunqanyeni ukuthengiswa kwakufaniswa phakathi kweqela le-placebo kunye nabamkeli be-Cetilistat powder. Ngenxa yeziphumo, uDkt. Kopelman waphetha ukuba i-Cetilistat powder inomsebenzi okhuselekileyo wokunyamezela, kwaye ikhuselekile kwaye iphumelele ekulawuleni ukukhuluphala nokuxhatshazwa kwayo.
10. Thenga i-anti-obesityity powder online
Umthengisi we-Obesity powderity-AASraw
Ungakwazi kwakhona ukuthenga i-Anti-Obesity powder online, nangona kunjalo, qiniseka ukuba ukuthengwa kwenziwa kwimihlaba ethembekileyo kunye nomthengisi we-powder Obesity powder powder. Iinguqu ezingekho mthethweni zale mziyo zikhuselekile kwaye zinokuba yingozi kwimpilo yakho. Unokuphinda ucele ugqirha wakho okanye umboneleli wezempilo ukuba akucebise umthombo onokwethenjelwa, ukuze ukwazi ukuthenga iPow-Obesity powder online ngoku.
Nantsi incomo ethembekileyo-AASraw, ebalulekileyo ekunikezeni i-anti-Obesity powder.AASraw supply quality quality Anti-Obesity powder kwaye ubumsulwa abukho ngaphantsi kwe-98%. Iintlobo ezikhethekileyo ezivela kwi-AASraw njengolu hlobo:
2) Umthumeli onamava okhuselekileyo uqinisekisa ukuthunyelwa okukhuselekileyo nokuqondayo kwikhompyutha yonke. Izindlela ezahlukeneyo zokuthutha, kunye nokukhetha okulungileyo kunakho kwikheli lakho.
I-4) Ixesha lokuhambisa le-Anti-Obesity powder: ii-3-5 iintsuku zokusebenza kwi-USA kunye neentsuku zokusebenza zokusebenza ze-4-6 kumazwe ase-EU.
I-anti-Obesity powder ukusuka kwi-AASraw
I-anti-Obesity powder CAS.NO Isistim Igama lebrand Iimbono zeNkanyezi
Sibutramine HCL 84485-00-7 Ukusetyenziswa ngokuthe ngqo kwe-sibutramine hydrochloride, umxholo ngamnye we-capsule 10-30mg. Meridia ★★★★★
Lorcaserin hydrochloride 1431697-94-7 10 mg ngomlomo kabini ngosuku. Belviq ★★★
I-Orlistat powder 96829-58-2 Elinye i-120-mg capsule kathathu ngosuku kunye nesondlo ngasinye esisisiseko esineziqhamo. Xenical ★★★★
Cetilistat powder 282526-98-1 60mg iifomsi zamandla zolawulo ngomlomo. Cetislim, setilista. ★★
Syneprine HCL 5985-28-4 50-100mg imihla ngemihla kunye ne-30-40 imizuzu ngaphambi kokufunda. Synephrine hydrochloride ★★★
Cetilistat (Oblean) powder Umthombo wemvelo we-Orlistat powder ukulahleka kwesisindo-I-fat loss loss drug ifanele uyazi !!! Yonke into omele uyazi ngayo malunga ne-Orlistat powder yokulahleka kweoli
tags: ukuthenga i-Cetilistat powder, uthenge i-Orlistat powder, Cetilistat powder, I-Orlistat powder
I-Avanafil powder Ukuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder ye-Treatment ED	Yohimbine powder: Isisombululo, izibonelelo, Imiphumo emibi, iziPhononongo